Posted by ငှက်လေး at 3:54 PM0comments
ငှက်လေး | 3:43 PM | ဗဟုသုတ
ခု ခေတ်မှာ ကွန်ပြူတာသုံးတဲ့သူ အရမ်းများတယ်နော်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေရှိသလို အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် အပျင်းပြေဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်သုံးရင်း အချိန်ကုန်နေတဲ့သူတွေကလည်း အများကြီးပဲလေ။ ဂိမ်းကို စွဲစွဲလန်းလန်းကစားနေတဲ့သူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ အဲဒီတော့ ကွန်ပြူတာအသုံးများလွန်းပြီး မျက်စိပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံရပြီပေါ့။ ကွန်ပြူတာအသုံးများလွန်းရင် မျက်စိက အများကြီးဒဏ်ခံရပါတယ်။ မျက်လုံးတွေေ၀၀ါးလာမယ်၊ ကြည့်ရတာလည်း အဆင်မပြေတော့ဘူး၊ မျက်လုံးအိမ်ခြောက်သွေ့လာမယ်၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ မျက်ရည်ပူတွေကျမယ်၊ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဇက်ကြောတွေလည်းတက်မယ်၊ မျက်မှန်သမားတွေဆိုရင်လည်း မျက်မှန်က ကြည့်ရတာအဆင်မပြေတော့ဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ မျက်စိက အလုပ်လုပ်ရလွန်းလို့ ဒဏ်မခံနိုင်တော့ဘဲ ဆန္ဒပြလာပြီပေါ့။ မျက်စိပါဝါတိုးမှာကလည်း သေချာသလောက်ပဲနော်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ရှောင်လွှဲနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အရမ်းလွယ်တယ်နော်။ လုပ်ကြည့်ကြရအောင်..။
- Flat LCD Monitor တွေမှာ အလင်းတာကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်ပါရှိလို့ မျက်စိကို ထိခိုက်မှုနည်းစေပါတယ်။
- ဒါကြောင့် ကွန်ပြူတာကို အကြာကြီးသုံးနေရတဲ့သူတွေဟာ Flat LCD Monitor ကိုပဲ သုံးသင့်တယ်နော်။
- ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်က ဖုန်မှုန့်လေးတွေကြောင့် သင့်မျက်စိထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် အံ့သြသွားမှာပဲနော်။
- ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်က အမြဲထုတ်လွှင့်နေတဲ့ လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေရဲ့ တွန်းကန်အားကြောင့် ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်က ဖုန်မှုန့်လေးတွေက သင့်မျက်လုံးဆီကို တန်းတန်းမတ်မတ်ကို ရောက်လာမှာပဲလေ။
- ကွန်ပြူတာက သင့်ရှေ့တည့်တည့်မှာပဲရှိပါစေ။
- သင့်မျက်နှာနဲ့ ကွန်ပြူတာက ၂ပေလောက် ကွာနေရမယ်နော်။
- ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာရဲ့မျက်နှာပြင်က သင့်မျက်လုံးနေရာထက် နိမ့်ရမယ်။
- ကွန်ပြူတာရဲ့အပေါ်ဘောင်က သင့်မျက်လုံးနဲ့တစ်တန်းတည်းဖြစ်နေရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။
- ဒါမှ သင့်မျက်လုံးနဲ့ လည်ပင်းက ပုံမှန်အနေအထားမှာရှိနေပြီး အားစိုက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေ။
- တကယ်လို့ အရောင်ကို အဖြူနဲ့အမည်းကြားမှာ သေချာစွာမချိန်ထားဘူးဆိုရင်တော့ အရောင်တွေကို သေချာခွဲခြားနိုင်ဖို့ အားစိုက်ကြည့်နေရတာနဲ့ မျက်စိကဒဏ်ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
- ဒါကြောင့် ကွန်ပြူတာရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ အရောင်တွေကို ကြည့်လို့ကောင်းပြီး သင့်တော်တဲ့အနေအထားရအောင် သေချာလေးချိန်ပေးဖို့ လိုတယ်နော်။
- တကယ်လို့ စာရွက်တွေ၊ စာအုပ်တွေထဲက စာတွေကို ကွန်ပြူတာထဲ ကူးရိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို ကွန်ပြူတာရဲ့ဘေးကပ်လျက်မှာ ထားသင့်ပါတယ်။
- သင့်မျက်လုံးတွေ များများလှုပ်ရှားစရာ မလိုအောင်ပေါ့။
- စာကူးရိုက်နေတုန်း စာအုပ်ကိုပဲကြည့်ပြီး အမှားစစ်မယ့်အချိန်လောက်ပဲ ကွန်ပြူတာကိုကြည့်ပါ။
- သင့်တင့်တဲ့ သဘာဝအလင်းရောင် ရှိရမယ်။
- ၁နာရီကြာတိုင်းလည်း မျက်လုံးကိုခဏမှိတ်ထားပြီး အနားပေးလိုက်ပါ။Blink More
- ဒါကြောင့် နာရီဝက်ကြာတိုင်း မျက်တောင်အခါ၂၀ ခတ်ပေးသင့်တယ်နော်။ Use Eyeglasses With The Proper Prescription
- သင်ဟာ မျက်မှန်တပ်ရသူဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မျက်စိပါဝါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ မျက်မှန်ကိုပဲ တပ်ဆင်သင့်တယ်နော်။
- မျက်မှန်တပ်စရာမလိုတဲ့ မျက်စိကောင်းသူတွေလည်း ပါဝါမပါဘဲ ရောင်ပြန်ပါတဲ့ မျက်မှန်လေးနဲ့ ကွန်ပြူတာကြောင့် မျက်စိထိခိုက်တဲ့ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
- အဲဒီတော့ မျက်လုံးကြွက်သားလေးတွေ အညောင်းပြေအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးကြရအောင်နော်။
- အလွယ်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ဖြေလျော့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပါပဲ။
- အားနဲ့တော့ မဖိလိုက်နဲ့နော်။
- ဒါဆိုရင်တော့ သင့်မျက်လုံးလေးတွေ အညောင်းပြေသွားလောက်ပြီနော်။
ကြာကြာဝါးမယ့်သွားက ဘာစားစား အရိုးကြည့်ရှောင်ရမယ်လေ။ ဒီလိုပဲ မျက်လုံးတွေကိုလည်း တသက်လုံး ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ဖို့ မျက်စိကို ဒဏ်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကို ရှောင်မှဖြစ်မယ်နော်။ အဲဒီတော့ အထက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်း လိုက်နာမယ်၊ မျက်စိအားကောင်းစေတဲ့အစားအစာတွေကိုလည်း အများကြီးစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် သင့်မျက်လုံးလေးတွေဟာ တစ်သက်လုံးအန္တရာယ်ကင်းနေမှာ သေချာပါတယ်။
Posted by ငှက်လေး at 3:43 PM0comments
ငှက်လေး | 3:27 PM | ဗဟုသုတ
အင်တာနက် ကဖီးတွေမှာ သွားသုံးတဲ့အခါ အထူးသတိထားရမယ့် အရေးကြီး အချက်တစ်ချက် ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်သုံးမယ့် KeyBoard ကြိုးနဲ့ ကွန်ပျူတာ System Unit နဲ့ ချိတ်မယ့် ပလပ်ပေါက်မှာ အနက်ရောင် Device လေးတစ်ခု ခံထားပြီဆိုရင် အဲဒီကွန်ပျူတာမှာ မသုံးတော့နဲ့။ အဲဒီBlack Device က ကိုယ်ရိုက်သမျှ အက္ခရာ ဂဏန်းတွေ အားလုံးကို သိုမှတ် သိမ်းဆည်းလိုက်တဲ့အတွက် သုံးတဲ့သူKeyboard မှာ ရိုက်သမျှ အားလုံးမှတ်ထားလိုက်ရော။ ကိုယ့်ရဲ့ E-mail Password အပါအဝင် အဲဒီနေ့ သုံးသမျှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေ အားလုံး ခိုးယူထားခံရပြီသာ မှတ်။ ခရက်ဒစ်ကတ်တို့၊ ဘဏ်စာရင်းတို့သုံးပြီး Online ပေါ်မှာ ဝယ်ချင်တာ ဝယ်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ခရက်ဒစ်ကတ်နံပါတ်တို့၊ ဘဏ်စာရင်းနံပါတ်တို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ ခိုးပြီးသားပဲ။ နေ့မကူးခင် အင်တာနက်ကဖီးတွေမှာသုံးရင် သတိထား။ ဘဏ်ထဲကရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေ ပြောင်ဖို့သာပြင်။ ဒီBlack Device ကို နိုင်ငံအချို့မှာတော့ ဟိုတယ်တွေ၊ ကုန်စည်ြပပွဲတွေ၊ လေဆိပ်တွေနဲ့ အင်တာနက်ကဖီးတွေမှာ အများအားဖြင့် သုံးကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အင်တာနက်ကဖီးတွေမှာ သုံးဖို့များတယ်။ သေချာစစ်ကြည့်ပြီးမှ သုံးပေါ့။ သေချာအောင် ပုံပါထည့်ပေး လိုက်တယ်။ အောက်ကလင့်ခ်လေးနှစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်နော်..။
Posted by ငှက်လေး at 3:27 PM0comments
ငှက်လေး | 3:07 PM | ဗဟုသုတ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဂန္တ၀င်စံတင်မည့်မိန့်ခွန်းစကားများ
၁။ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြ။
အင်အားမရှိဘဲနဲံ စာရွက်ပေါ်မှာ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နှင့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံကို ဘယ်လိုကြီး ရေးသားထား ပေမယ့် ထို၏နောက်မှာ အင်အားကောင်းမရှိလျှင် ဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ ( နိုင်ငံရေး ရှင်းလင်းပွဲ မိန့်ခွန်း ၁၉၄၇ မတ်လ (၁၉)ရက်)
တိုင်းသူပြည်သား လူအများဟာ ဥမကွဲသိုက်မပျက်တညီတညွတ်တည်း စည်းကမ်း တကျ ရှိဖို့လိုတယ်၊ မလိုတဲ့သူ တွေဘယ်လို တိုက်တိုက်၊ ရှို့ ရှို့ ၊ စစ မိမိအဓိက ပန်းတိုင် ကိုမျက်ခြေပြတ်မခံနဲ့၊ လမ်းမလွဲအောင်ကြိုးစားဖို့ လိုတယ်၊နယ်ချဲ့ သမားကို တ ကယ် တိုက်မယ် ဆိုတဲ့ လူအချင်းချင်းဟာ အချင်းချင်း တိုက်နေဖို့မလိုဘူး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးဘယ်လိုပဲ သဘောထား ကွဲလွဲ နေပင်မယ့်နယ်ချဲ့ သမား ကို တိုက်ခိုက်တဲ့တပ်ဦးလွန်မှ နယ်ချဲ့ သမားထောက်ခံလမ်းတွေ မလိုက်မိဖို့ လိုတယ်။ (အသံလွှင့်ဟောပြောချက် ၁၉၄၇၊ဇန်န၀ါရီ(၁)ရက်ည၇း၄၀မိနစ်)
၃။ တစ်မျိုးသားလုံး အစွမ်းကုန် ညီညွတ်ကြပါ
တစ်တိုင်းပြည်လုံး ကြီးပွားစေလိုရင် လူအား၊ ငွေအား၊ပစ္စည်းအားနဲ့ စုပေါင်း ပြီးအင်တိုက်၊အားတိုက် လုပ်နိုင်မှ အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိကြမှာပဲ၊ဗမာကတစ်မျိုး၊ကရင်ကတစ်ဖုံ၊ရှမ်း၊ကချင်၊ချင်းက တခြားအကွဲကွဲ အပြားပြား လုပ်နေကြရင် အကျိုးရှိမှာ မဟုတ် ဘူး၊စုပေါင်းမှသာအကျိုးရှိနိုင်တယ်။ ( ပင်လုံစော်ဘွား ညစာစားပွဲ မိန့်ခွန်း ၁၉၄၇.၂.၁၁ ည )
လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့သဘောမျိုး မဟုတ်ဘူး၊စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ သဘောမျိုးသာဖြစ်တယ်။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ရှိမှသာလျှင် လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်၊အဲဒီတော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ ကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခါမှာပဲ နားလည်ရမှာက ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာ ပိုပြီးစည်းကမ်း ရှိဖို့လိုတယ်၊ရှေ့ကိုလွတ်လပ်ရေးအရသာကို ခံစားချင်တယ်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်ကြဖို့၊စည်းကမ်းရှိကြဖို့၊အခုကတည်းကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် အကျင့်ဆိုးတွေ၊အကျင့်ဟောင်းတွေပြင်ကြဖို့ လိုပြီ။
((မြို့တော်ခန်းမ မိန့်ခွန်း မိန့်ခွန်း ၁၉၄၇ ဇန်န၀ါရီ (၁၃))
သူတစ်ပါးနိုင်ငံက ကိုယ့်နိုင်ငံကို လာစော်ကားလို့ အသက်စွန့်ပြီးမလျော့တမ်း ကာကွယ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးကတော့ အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တယ်၊ (ပင်လုံညစာစားပွဲတွင် မြွတ်ကြားသည့် မိန်ခွန်း)
၆။ ဗမာပီပီ ဗမာ့သွေးကိုပြ
ကျုပ်အကျယ်ချဲ့ပြီး ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောလိုဘူး၊အခုရဲဘော်တို့စစ်မြေပြင်ကိုစစ်ထွက်မယ်၊ဆင်းရဲမယ်ငတ်မယ်၊ အဆင်းရဲ ကို ဂရုမစိုက်နဲ့၊ ရင်မြေကတုတ် လုပ်၊ အောင်ပွဲရအောင် ကြိုးစားဗမာပီပီ ဗမာ့သွေးကိုပြ၊ (မတ်လ၉၂၇)ရက် တော်လှန်ေ၇း ပန်းခြံ တပ်ထွက် မိန့်ခွန်းမှ)
၇။ လူထုအတွက် လုပ်
ကျုပ်အခု နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်နေတာဟာ သရဖူကြီး လိုချင်လို့ပဲ၊ ကျုပ်ဆောင်း ဖို့မဟုတ်ဘူး၊ လူထုအားလံုး ဆောင်း ရမယ့် လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့သရဖူကြိးပဲ။ (နေသူရိန် အစည်းအဝေး မိန့်ခွန်း)
ပဒေသာပင်ပေါက်အောင်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ် မှဖြစ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ ခင်ဗျားတို့ နားလည်စေချင်တယ်။ (၁၉၄၇၊ ဧပြီ (၅)ရက်အသံလွှင့်မိန့်ခွန်း)
တိုင်းပြည်မှာ လူကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ လူငယ်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုလူမှစိတ်မချနဲ့။ သူတို့မလိမ်နိုင်အောင် ကြိုးချည်ထားပါ လို့ ပြောချင်တယ်။
(ရန်ကန်ုမြို့လုံးဆိုင်ရာ ဖဆပလ ညီလာခံမိန်ခွန်း)
အတော့်ကိုပြဲအောင်ကြိုးစားလုပ်နိုင်မှအဲဒါ အတော်ကို ကုန်းနိုင်မှ အနှစ် (၂၀)လောက်ရှိတဲ့အခါ တော်ကာကျမယ်။
(အသံလွှင့် မိန့်ခွန်း ၁၉၄၇၊ဧပြီ (၅)ရက်)
ဖတ်မိ သလောက်စုစည်း တင်ပြလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းများအားလုံးရွှင်လန်းကြပါစေ
mm-flashsongs မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်
Posted by ငှက်လေး at 3:07 PM0comments
ငှက်လေး | 6:37 AM | ဗဟုသုတ
ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလော့လေးကို လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်
ဒီဘလော့လေးက သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ဗဟုသုတရမယ့် စာစုလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတို့နေ့စဉ် ဖတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော် ကြိုးစားတင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ
ဒီတခါတော့ သူငယ်ချင်းတို့ဟာ တနေ့ ဖေဖေ မေမေ ဖြစ်လာကျမှာပါ။အဲဒီအခါ ကိုယ့်သားသားမီးမီးလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပုံ နည်းလမ်းလေးတွေကို ပုံလေးနဲ့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်နော်
အမှားပါတာ အဆင်မပြေတာများရှိရင် ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကျပါနော် :)
GTU online မှပြန်လည်မျှဝေသည်
Posted by ငှက်လေး at 6:37 AM0comments
ငှက်လေး | 6:27 AM | ဗဟုသုတ
Posted by ငှက်လေး at 6:27 AM0comments
ငှက်လေး | 9:05 AM | ဘဝအမောပြေ
ဆရာမ မရှိတော့ ပွတ်လောရိုက်နေကြ၏။ မကြာခင်မှာတစ်ကျောင်းလုံးကကြောက်သော မျက်နှာထားတင်းတင်း ဆရာမ အတန်းထဲဝင်လာ၏။ မီးကိုရေနဲ့ ငြိမ်းလိုက်သလို ချက်ချင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ကျသွား၏။
' ဘာလဲ၊ မင်းတို့က ဒါပဲတက်သလား၊ နေ့ခင်း ညနေခင်း တစ်နေ့လုံးအတွက်ပါသွားအောင် မပြောတက် ကြတော့ဘူးလား'
"ဂွတ်မောနင်း၊ အားဖတားနွန်း၊ အီးဗီးနင်း "ဟု ညီညီညာညာ ရွတ်ပြလိုက်ကြ၏။
'မကောင်းဘူးရှည်တယ်၊ တစ်နေ့လုံးပါသွားအောင် အကောင်းဆုံး စဉ်းစားကြ'
အေး၊ အဲဒါမှန်တယ်၊ ကဲ စာသင်မယ်၊ ငါက စကားတစ်လုံး၊ ဒါမှမဟုတ် ၀ါကျတစ်ကြောင်း ရွတ်ပြလိုက်မယ်၊ မင်းတို့က ဆန့်ကျင်ဘက် ၀ါကျကို ပြန်ပြောရမယ်၊ ကဲ စပြီ ၊ လိမ်မာသော...
တပည့်လေးများက မဆိုင်းမတွပင် မိုက်သော ဟု ညီညီညာညာ ပြောလိုက်ကြသည်။
'ဟဲ့၊ ငါမေးနေတာ မဟုတ်ဘူး'
"ဟဲ့၊ ငါဖြေနေတာ မဟုတ်ဘူး"
'နင်တို့ဟာ နင်တို့ စစ မစစ ငါသွားပြီ'
တပည့်များ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝါကျ စဉ်းစားမရခင်မှာ ဆရာမ အတန်းအပြင်ဘက် ရောက်သွားတော့၏။
Posted by ငှက်လေး at 9:05 AM0comments
ငှက်လေး | 9:00 AM | ဗဟုသုတ
၁. အကယ်၍ သင်ဟာ သင့်ချစ်သူကို တကယ်ချစ်မိပြီဆိုရင် အရာရာကို ပေးဆပ်ရပါတော့မယ်..
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဟာမိန်းကလေးဆိုရင် ချစ်သူတောင်းဆိုတိုင်းမလိုက်လျော့သင့်ပါဘူး
ယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုရင်လည်း ချစ်သူကို တကယ်ချစ်ရင် ရမ္မက်ပါတာမျိုးကို မတောင်းဆိုသင့်ပါဘူး.။ကိုယ့်ချစ်သူကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်..။
မိန်းကလေးတွေဘက်ကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှ တန်ဖိုးမထားရင် ဘယ်သူကမှ တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ထားပါ..။
၂. အကယ်၍ သင်ဟာ ချစ်သူကို စိတ်ဆိုးစေမယ့်အရာတစ်ခုခုကို လုပ်မိတယ်ဆိုရင် ချစ်သူ စိတ်ဆိုးပြေတဲ့အထိ ရှင်းပြပါ.. ဖြေရှင်းချက်ပေးပါ... ။ တစ်နေ့နေ့ နားလည်လာပါလိမ့်မယ် တကယ်ချစ်ရင် ခွင့်လွှတ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ ရူးကြောင်ကြောင် အတွေးမျိုးတွေကို ဖျောက်ဖျက်ထားပါ...
၃. ကိုယ့်ချစ်သူက မှားကြောင်းဝန်ခံပြီး ဖြေရှင်းချက်ပေးတာက အကျိုးအကြောင်းသင့်လျော်ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ.. တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် သစ္စာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုရင်တော့ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါတော့.....။
၄. သင်ဟာ သင့်ချစ်သူကို စိတ်ဆိုးခဲ့ပြီဆိုရင်လည်း သူ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တယ်.. သူ့ကို ဘာကြောင့် စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါ... သူက အကြားအမြင်ရနေတဲ့ လူတစ်ယောက်မဟုတ်သလို သင့်စိတ်ထဲကိုလည်း သူအကုန် ၀င်ကြည့်လို့ မရပါဘူး သင်မှ မပြောရင် သူမသိနိုင်ပါဘူး ..
၅. စိတ်ဆိုးလို့ ဖုန်းမကိုင်တာ အဆက်အသွယ် မလုပ်တာမျိုးတွေကို ရှောင်ပါ.. သူ့ဖြေရှင်းချက်ကို ဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ.. တစ်ခဏ အတွေးတိမ်ခြင်းဟာ ဘ၀တစ်ခုလုံး အတွက် နောင်တရစရာဖြစ်နိုင်လို့ပါ.
၆. ချစ်သူကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါ။ သင့်ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲ စေမယ်ဆိုရင် ကြာရင် စိတ်ကုန်သွားပြီး နောက်ထပ် အသစ်ရှာသွားနိုင်လို့ပါပဲ..။စိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း သူ့နေရာနဲ့ သူ့အတိုင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
၇. ချစ်သူအချင်းချင်း ကိုယ့်ဘက်က မှားတာရှိရင် တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးပါနဲ့..။မိန်းကလေးမို့ ယောက်ျားလေးကပဲ ချော့ရမယ်ဆိုပြီး မတောင်းပန်တာမျိုးကိုရှောင်ပါ...။ယောက်ျားလေးမို့သိက္ခာကျတယ်ဆိုပြီး မတောင်းပန်တာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့..။ချစ်သူတွေမှာ ကိုယ်နာတာ သူသာတာမရှိပါဘူး ..
၈. ဆွယ်တော်ရွက်လိုသဘောထားနိုင်ပါစေ...။၂လွှာပေါင်းမှ တရွက်ဆွယ်တော်ရွက်လိုပဲ ချစ်သူ၂နှစ်ကလည်း ၂ယောက်ပေါင်းမှ တစ်ဘ၀ဆိုတာ အမြဲသတိရနေပါ.။ စိတ်ညစ်စရာကအစ ပျော်စရာအဆုံး ဖွင့်ဟနိုင်အောင်လုပ်ပါ. မိသားစု အရေးက အစ နှစ်ဖက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်နေ့ဒီလူနှစ်ယောက်ပဲ တစ်သက်လုံးပေါင်းဖက်မှာ မို့လို့ပါပဲ..။ရှက်စရာမဟုတ်သလို သရော်လှောင်ပြောင်ရမယ့် ကိစ္စလည်း မဟုတ်ပါဘူး .။
၉. ရိုးသားပွင့်လင်းကြပါ..။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လျှို့ဝှက်ချက်မထားပါနဲ့..။အခု မသိလည်း နောင်သိမယ့် ကိစ္စတွေပဲဆိုတာ သတိရပါ...။
၁၀. စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှကို ရှင်းပါ.. ။ အခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်းမည်ဖြစ်သည်..( အခုရှင်းမှ နောင်မရှုပ်မည်... :P )
မသိချင်ယောင်ဆောင်မနေပါနဲ့ .။ ရင်ထဲက အလုံးတွေများလာရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ အစုလိုက်အပုံလိုက်ပေါက်ကွဲထွက်ပြီးတော့ အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်စရာတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.. ။ တစ်ခုကို တစ်ခု ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရှင်းတတ်ကြပါစေ.....
၁၁. ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူရည်းစားမှာ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းဆိုတာ အနည်းနဲ့ အများရှိမှာပဲလေ.. ချစ်သူကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် သိပ်မချုပ်ချယ်ပါနဲ့.။ စိတ်မချဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ သူ့ရဲ့ သစ္စာတရားကို အထင်မလွဲမိပါစေနဲ့..။ပညာရှိနည်းသုံးပြီး သူ့သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ကိုယ်နဲ့ ခင်အောင်ပေါင်းထားပေါ့..။ သူ့အကြောင်းတောင် စုံစမ်းလို့ရသေး :P
၁၂. မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သစ္စာရှိပါစေ.. ။ ချစ်သူက ဘယ်လောက်ပဲ သစ္စာရှိနေပါစေ..။ ကိုယ်က ရှုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့လိုအချစ်မျိုးက ကြာကြာခံမယ် မထင်ပါနဲ့..။ မင်းတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်တာပါ ကျန်တဲ့ချစ်သူတွေက အလကားပါလို့ ပြောတိုင်း မယုံမိပါစေနဲ့..။ ပါးစပ်ပါရင် စကားဆိုတာဖြစ်မှာပါ..။ကိုယ်တိုင်သစ္စာရှိမှ ချစ်သူက သစ္စာရှိနိုင်မယ်ဆိုတာ အမြဲတွေးထားပါ..။
၁၃. ကြားစကားများကို တတ်နိုင်သလောက်မယုံမိအောင်ကြိုးစားပါ..။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ လိုတဲ့လူတွေ ရှိသလို မလိုတဲ့လူတွေ မနာလိုတဲ့လူတွေဆိုတာကလည်း ရိုက်သတ်လို့ ကုန်မယ်မထင်ပါဘူး.။ ဒီတော့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ချင့်ချိန် စဉ်းစားပြီးမှ ယုံပေါ့...။ မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် သက်သေ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြနိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တကယ် ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းစေချင်တဲ့ လူမျိုးက ပြောမှ ယုံသင့်ပါတယ်..။ ကြားလေသွေးလို့ ဝေးသွားရတာမျိုးမဖြစ်စေရအောင် ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့သေချာစဉ်းစားပြီး ယုံသင့်ပါတယ်.။
၁၄. နားလည်မှုရှိတတ်ကြပါစေ..။ချစ်သူတွေကြားမှာ အရေးကြီးဆုံး က နားလည်မှုပါပဲ..။ နားလည်မှုနဲ့ အရာရာကို တည်ဆောင်နိုင်လို့ပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူကို အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင် နားလည်မှု တတ်နိုင်သလောက်ပေးပြီး အစစ အရာရာ အတွက် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ကြပါတယ်...။
၁၅. အကောင်းမြင်တတ်ပါစေ။ ကိုယ်က ချစ်နေတဲ့လူဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူ ဘာပဲ လုပ်လုပ် ကောင်းတယ်လို့ ဖြစ်တတ်ကြတာသဘာဝ ပါပဲ..။ချစ်သူရဲ့ အပြုအမူတိုင်းဟာ ကိုယ့်အတွက် ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး လုပ်သမျှ အကောင်းမြင်လို့ရနေရင် သေချာပါပြီ ကိုယ်ဟာ သူ့အပေါ်အကောင်းမြင်ဝါဒီစွဲ တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းမသိဖြစ်နေပါပြီ...။
၁၆. ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အရာရာ အလေးအနက်ထားတတ်ပါစေ..။သင်ဟာ ယောက်ျားလေး ဖြစ်စေ မိန်းကလေးဖြစ်စေ သင့်ချစ်သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရာတိုင်းကို အလေးအနက်ထားပါ..။
ဥပမာ- ချစ်သူရဲ့ မွေးနေ့ ၊ အမှတ်တရ ရက်စွဲများ ၊ နှစ်ပတ်လည်များကို တတ်နိုင်သလောက် မမေ့ပါစေနဲ့..။ ချစ်သူရဲ့ အလေးအနက်ထားတတ်ခြင်းက ချစ်ခံရသူရဲ့ စိတ်ကို 90% လောက်အထိ အချစ်တွေ တိုးတက်လာစေပါတယ်...
အားလုံး ချစ်ရသူနဲ့ အဆင်ပြေပြီး ထာဝရ လက်တွဲသွားနိုင်ကြပါစေ...။
င်္Forward mail မှ ပြန်လည်ဝေမျှသည်
Posted by ငှက်လေး at 9:00 AM0comments
ကျွန်တော်တို့၏ ပထမဆုံး အလုပ်တွင် ရှောင်လွှဲရမည့် အမှား (၈) ရပ်
ငှက်လေး | 8:50 AM | ဗဟုသုတ
ကဲ...ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့တစ်ခုရပြီး ၊ စီးပွားရေးတွေကျဆင်းနေတဲ့ ကြားထဲက အလုပ်တခုရပြီနော် ၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အခုမှ တကဲ့လုပ်ငန်းခွင် ဘဝစမှာပါ။ အခု ပထမဆုံး အလုပ်မှာ ပိတ်မိမနေဘဲ နောက်နောင် ယခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေရပြီး၊ အောက်ပါပြောထားတယ့် အလွဲရှစ်ရပ်ကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ..... :)
ပထမဆုံး အလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့နေ့မှာ ကိုယ့်အစွမ်းအစကို သိအောင်ထုတ်ပြချင်တာကတော့ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အများအမြင်မှာ ကိစ္စတစ်ခုကို တက်တက်ကြွကြွ ဦးဆောင်လုပ်တာနဲ့ လူတွင်ကျယ်အောင်လုပ်တာနဲ့ သိပ်မကွာဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်။ "They Don't Teach Corporate in College" စာအုပ်ကို ရေးသားသူ Alexandra Levit ကတော့ ဒီလိုဆိုပါတယ်။ "ကိုယ့် နာမည်ရဖို့ ကိစ္စတွေကို ချက်ချင်း ဝုန်းဒိုင်း ဝုန်းဒိုင်း ထမလုပ်ပါနဲ့ ၊ သူများတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် ၊ သူတို့ စိတ်ကူးတွေကို ဘယ်လို တင်ပြတယ်ဆိုတာကို အရင် လေ့လာပါ။ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ကြတယ် ဆိုတာကို သေချာသိပြီဆိုမှ သင့်ရဲ့ အကြံကို တင်ပြပြီး သူရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကို တောင်းခံပါ။"
ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံး ဌာနတွင် အစည်းအဝေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာတွေ ရေးမှတ်ထားတဲ့ စာရွက်ကြီးနဲ့ မသွားသင့်သလို၊ အလုပ်စလုပ်တဲ့ပထမတလလုံး အခန်းထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး တခြားလူတွေက လာမိတ်ဆက်မှာကို စောင့်မနေသင့်ပါဘူး။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုရယူပြီး သူတို့ဘာတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာလေ့လာသင့်ပါတယ်။ လူတွေက ကိုယ့်ကိုလျှစ်လျူရှုထားတယ်ဆို ပြီး အမြင်မစောင်းသင့်ပါဘူး။
(ဂ) နည်းပညာကို တလွဲသုံးခြင်း
အစည်းအဝေးလုပ်နေတုန်း text message ပို့လို့ရလား ၊ ရုံးချိန်အတွင်း Facebook သုံးလို့ရလား အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ i-pod နားထောင်လို့ ရလား။ ဒီကိစ္စတွေကို ကုမ္ပဏီ တခု နဲ့ တခု ခွင့်ပြုတာခြင်း မတူကြပါဘူး။ တခြားလူတွေ ဘယ်လို နည်းပညာကို သုံးနေကြတယ်ဆိုတာကို ဂရုစိုက်လေ့လာပါ။
(ဃ) အစတည်းကတည်းက ယဉ်သကို
အဝတ်ဝတ်တာကအစ ၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာအဆုံး အခြားလူတွေကလူသစ်ဖြစ်တဲ့သင့်ကို သတိထားစောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်။ Levit ကလူတွေနဲ့ ပထမဆုံးတွေတဲ့အချိန်မှာသင်ဘယ်လို ပြုမူတယ်ဆိုတာကို အထူးသတိထားဖို့အဆိုပြုထားပါတယ်။
(င) သင့်အထက်လူကြီး လိုအပ်ချက်များအား
အလုပ်ခွင်ဝင်ဝင်ခြင်းပထမသုံးလအတွင်း သင့်အထက်လူကြီးက သင့်ထံမှဘာတွေ မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာ သိအောင်လုပ်ဖို့လ်ိုပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အကြံပေး Peter Jacobs ကတော့သင်ရဲ့လူကြီးနဲ့ ပုံမှန်တွေဆုံဆွေးနွေးပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လိုအပ်ချက်တသားထဲဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့လိုကြောင်း တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။
(စ) သင့်အထက်လူကြီးကို နားမလည်ခြင်း
သင်နှင့်သင့် အထက်လူကြီး ပြောဆိုဆက်ဆံပုံ စတိုင်ချင်း တူခြင်မှတူပါလိမ့်မယ်။ သူဘယ်လိုပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံတာကို နှစ်သက်တယ်ဆိုတာ သိအောင်လေ့လာပါ။ သင့်လူကြီးက သတင်းအချက်အလက်တွေကို နှစ်သက်တယ်ဆိုတာ သိအောင်လေ့လာပါ။ သင့်လူကြီးကသတင်းအချက်အလက်တွေကို အီးမေးနဲ့လိုချင်တာလား၊ အစီရင်ခံစာနဲ့လိုချင်တာလား၊ ဘယ်လိုပုံစံနဲလိုချင်တယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအစီရင်ခံနေဖို့လိုလား၊ အရေးကြီးအကြောင်းအရာတွေကိုပဲသိချင်တာလား၊ ဆိုတာသိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
(ဆ) အထီးကျန်စွာ နေထိုင်ခြင်း
သင့်အထက်အရာရှိသည် လွန်စွာအသုံးဝင်သော အရင်းအမြစ်တခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ခိုင်မာသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်တခုတည်ဆောက်နိုင်ရန် လူအများအပြားထံမှ အကြံဥာဏ်များရယူရန်လိုအပ်သည်။ မိမိအားနည်းမှန်လမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြပေးနိုင်မည့်ဆရာကောင်းများ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေစရာပုဂ္ဂိုလ်များရှာဖွေထားရန်လိုသည်။
(ဇ) အလုပ်ကို တန်ဖိုးမထားခြင်း
သင်၏လက်ရှိအလုပ်က အရမ်းကောင်းတာပာုတ်ချင်မှပာုတ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအလုပ်မှာ အတတ်ပညာသစ်တွေကို ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေး၊ စီးပွားရေးအခွင့်အရေးလောကအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေး၊ အသိမိတ်ဆွေအသစ်တွေကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအဖြစ် ရှုမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ယခုအချိန်ကို သိမှတ်စရာတွေ သင်ယူရတဲ့ အချိန်အဖြစ် သဘောထားပြီး ပျော်ပျော်နေလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုအချိန်ကို နောင်ဘယ်တော့မှ ပြန်ရနိုင်မှာမပာုတ်တော့လိုပါ။
Forward mail မှပြန်လည်မျှဝေသည်
Posted by ငှက်လေး at 8:50 AM0comments
ငှက်လေး | 8:30 AM | ဗဟုသုတ
ကျွန်တော်တို့ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ပီ ဘဝကိုရှေ့ဆက်ကျရပါတယ်
အဲဒီလိုရုန်းကန်နေကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘဝမှာအဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ နေထိုင်နိုင်ဖို့ အချက်လေး(10)ချက်ကို လိုက်နာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်တို့ဟာ ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်မယ့် လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ပါ....:)
The most selfish ONE letter word "I" - Avoid it.
The most satisfying TWO letter word "WE" - Use it.
The most poisonous THREE letter word "EGO" - Kill it.
The most used FOUR letter word "LOVE" - Value it.
The most pleasing FIVE letter word "SMILE" - Keep it.
The fastest spreading SIX letter word "RUMOUR" - Ignore it.
The hardest working SEVEN letter word "SUCCESS" - Achieve it.
The most enviable EIGHT letter word "JEALOUSY" - Distance it.
The most powerful NINE letter word "KNOWLEDGE" - Acquire it.
The most essential TEN letter word "CONFIDENCE" - Trust it.
(1)The most selfish one-letter word is' I ' . Avoid it. အက္ခရာတစ်လုံးတည်းရှိတဲ့ တကိုယ်ကောင်းအဆန်ဆုံးစကားလုံးကတော့ `ငါ´ ပါ။ အဲဒါကို ရှောင်ကျဉ်ပါ ... တဲ့။
(2)The most satisfying two-letter word is' We ' . Use it. အက္ခရာ နှစ်လုံးပါတဲ့ စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး စကားလုံးကတော့ `ငါတို့´ ပါ။ အဲဒါကို အသုံးပြုပါ တဲ့။
(3)The most poisonous three-letter word is' Ego ' . Kill it. အက္ခရာသုံးလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဆိပ်အပြင်းဆုံးစကားလုံးဟာ `အတ္တ´ ပါ။ အဲဒါကို သတ်ပစ်ပါ။
(4)The most used four-letter word is' Love ' . Value it. အက္ခရာလေးလုံးပါတဲ့ လူသုံးအများဆုံးစကားလုံးကတော့ `ချစ်ခြင်းမေတ္တာ´ ပါ။ အဲဒါကို တန်ဖိုးထားပါ။
(5)The most pleasing five-letter word is' Smile '. Keep it. အက္ခရာငါးလုံးပါတဲ့ ကြည်နူးစရာအကောင်းဆုံးစကားလုံးကတော့ `အပြုံး´ ပါ။ အဲဒါကို ဆောင်ထားပါ တဲ့။
(6)The fastest spreading six-letter word is' Rumour '. Ignore it. အက္ခရာခြောက်လုံးပါပြီး အလျင်မြန်ဆုံးပျံ့နှံ့လွယ်တဲ့စကားလုံးကတော့ `ကောလဟာလ´ ပါ။ အဲဒါကို လျစ်လျှူရှုပါ တဲ့။
(7)The hardest working seven-letter word is' Success '. Achieve it. အက္ခရာခုနှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး အပြင်းထန်ဆုံးကြိုးစားရယူရတဲ့စကားလုံးကတော့ `အောင်မြင်မှု´ ပါ။ အဲဒါကို အရယူပါ တဲ့။
(8)The most troublesome eight-letter word is ' Jealousy '. Distance it. အက္ခရာရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဒုက္ခအပေးဆုံးစကားလုံးကတော့ `မနာလိုဝန်တိုမှု´ ပါ။ အဲဒါကို ဝေးဝေးရှောင်ပါ တဲ့။
(9)The most powerful nine-letter word is ' Knowledge '. Acquire it. အက္ခရာကိုးလုံးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ အင်အားအရှိဆုံးစကားလုံးကတော့ `အသိပညာဗဟုသုတ´ ပါ။ အဲဒါကို ကြိုးစားရယူပါ တဲ့။
(10)The most essential ten-letter word is ' Confidence '. Build it. အက္ခရာဆယ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးစကားလုံးကတော့ `ယုံကြည်မှု´ ပါ။ အဲဒါကို တည်ဆောက်ယူပါ တဲ့။
Posted by ငှက်လေး at 8:30 AM0comments